Soo-saareyaasha Qaybaha Maareynta Hawada - Shiinaha Warshadaha & Shirkadaha Maareynta Hawada
Naqshadaynta Qaybta Xasaasiga ah ee Kiiskii AHU;
Dayactir badan oo habboon.
Cutubyada Qabashada Hawada ee Soo-celinta Heat Warshadaha
Waxaa loo adeegsaday daaweynta hawada gudaha. Qaybta Qaboojinta Hawada Warshadaha Heer Warshadeed waa qalab waaweyn oo dhexdhexaad ah oo qaboojiye ah oo leh shaqooyinka qaboojiyaha, kululaynta, heerkulka joogtada ah iyo qoyaanka, hawo-siinta, sifaynta hawada iyo soo-kabashada kuleylka. Feature product Alaabtaani waxay iskuxireysaa sanduuqa qaboojiyaha isku dhafan iyo tikniyoolajiyadda sii ballaadhinta tooska ah, taas oo xaqiijin karta xakamaynta isku dhafan ee qaboojiyaha iyo qaboojinta. Waxay leedahay nidaam fudud, stabl ...
Units Qabashada Hawo gariiradda DX soo kabashada Heat
Isku dhafan tiknoolajiyada aasaasiga ah ee HOLTOP AHU, DX (Ballaarinta Tooska ah) gariiradda AHU waxay bixisaa labadaba AHU iyo unugga isku-uruurinta dibadda Waa xal dabacsan oo fudud dhammaan aagga dhismaha, sida suuqyada, xafiiska, Shineemo, Iskuulka iwm Qaybta tooska u ballaadhinta kulaylka iyo nadiifinta hawo qaboojiyaha waa unug daaweyn hawo oo u adeegsada hawo il qabow iyo kuleyl , waana qalab isku dhafan oo ka kooban ilo qabow iyo kuleyl labadaba. Waxay ka kooban tahay qaybta isku soo ururinaysa isku xoqidda hawada ...
Qaboojiyaha hawo leh hawo soo kabashada kuleylka, waxtarka soo kabashada kuleylka ayaa ka sarreeya 60%.
Noocyada Qoyaxa Nooca Hawlaha Qabashada Hawada Waxtarka sare iyo isku halaynta: Gebi ahaanba iskiis u kooban cutub bir ah oo adag oo bir ah oo leh labalaab maqaar… CNC oo lagu farsameeyay dahaadhka darajada warshadaha, maqaarka dibedda ah ee loo yaqaan 'MS powder coated', maqaarka gudaha GI .. codsiyada gaarka ah sida cuntada iyo dawooyinka maqaarka gudaha wuxuu noqon karaa SS. Awoodda ka-qaadista qoyaanka. Fasalka EU-3 wuxuu sifeeyaa shaandhooyin ciriiri ah oo qaada Hawada. Xulasho badan oo ah isha kuleylka dib-u-dhaqaajinta: -kulladaha, uumiga, hargabka kuleylka ...
Qaybaha Isukeenista Hawada ee Warshadaha
Warshadaha AHU waxaa si gaar ah loogu talagalay warshad casri ah, sida Automotive, Electronic, Spaceflight, Pharmaceutical iwm Holtop waxay bixisaa xalka lagu maareeyo heerkulka hawada gudaha, huurka, nadaafadda, hawo nadiif ah, VOCs iwm.